Maxaa kasoo baxay kulankii Rooble iyo Farmaajo? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa kasoo baxay kulankii Rooble iyo Farmaajo?
Markii uu soo idlaaday shirkaas, Kaddib waxaa kulan gaar ah uga billowday xafiiska Madaxweynaha, Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble kaliya, halka ay dibad joog ka yihiin dhammaan xubnihii kale ee wajiga koowaad ee kulanka qeybta ka ahaa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kulan saacado qaatay oo u dhaxeeyay Madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ee Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble oo ay gar-wadeen ka ahaayeen Qoor-Qoor iyo Lafta-Gareen ayaa maanta ka dhacay Villa Somalia.
Illo-wareedyo ayaa u sheegay KON in labada dhinac ay isku afgarteen qodobbo kamid ahaa waxyaabihii ay isku khilaafeen, oo kamid ah kiiska Ikraan Tahliil, oo ka dhashay loolanka taagan.
Villa Uganda oo uu markii hore ka bilowday shirka waxaa ka wada qeyb-galay madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed, Wasiirka Waxbarashada iyo Wasiir ku xigeenka Warfaafinta.
Kulankan gaarka ah ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble ayaa ka dambayay markii Farmaajo uu codsaday inuu Ra’iisul Wasaare Rooble la yeesho kulan gaar ah oo ay uga wada hadlaan sidii farsamo ahaan loo fulin lahaa qodobbada la isku afgartay ee lagu xallinayo khilaafka taagan.
Ma cadda waxa ka soo naaso cadaan kara kulankan, maadaama Farmaajo uusan laheyn ballan sida dadka qaar ay rumeysan yihiin.